Okufanele ukwenze uma ubuhlungu izinso? Ishayela i-ambulensi uhlukile. Zonke kakhulu ezweni lwethu ucingo akudingekile ukuthi akhokhe egunjini labadinga usizo oluphuthumayo. Ngakho kunoma isiphi isimo ungaphuzi futhi ababuzwa umuthi wezinhlungu, futhi ngokushesha uyobiza nakuyi-ambulense. Uma ubuhlungu nzima, ukuya owelapha kanye Urologist.
Ukuze ufunde indlela ubuhlungu izinso, ukutshela udinga ngokugcwele ngangokunokwenzeka le Urologist, ngoba kuyindlela izinso ukukulimaza, ungenza uphethwe kwesikhashana futhi uphethwe ukuqinisekisa uphethwe. Ngokuvamile atholakala iziguli pyelonephritis, ezinso, kwezinso colic, ptosis kwezinso. Uma ultrasound akazanga ezinso kanye kwanoma iyiphi anomalies ezifana izinso noma ukwandisa offset ke ukuthi nginesifo pyelonephritis. Noma exacerbation of pyelonephritis esingamahlalakhona noma oyingozi.
Ukwelashwa nokuvikelwa pyelonephritis (kokubili oyingozi futhi ezingalapheki) angaqoka udokotela - Urologist.
Ngokuvamile, ukuhlaziywa ukuqinisekisa Urologist esabela isampuli umchamo yi nechyporenko indlela noma Zimnitsky (ukuvuvukala isebenze izinso, ephelezelwa proteinuria lenyuke). Phezu ukuthola izinguquko sokugembula ukhombe izindlela zocwaningo esinembile - ultrasound esinyeni nezinso, kanye okudingekayo ukuhlolwa Ochwepheshe (uma kukhona kungenzeka pyelonephritis zesibili), ukuhlolwa kwegazi, X-ray Ngokuphambene ejenti, luhlolo radiology, njll
pyelonephritis Ukwelashwa iqondiswa ngamunye, ikhumbula ubunjalo isifo, khona izifo concomitant, ubudala lesiguli, nokunye okunjalo. umbuso umile kungenziwa Kunconywa ezimweni ezinzima. Phakathi exacerbation, okuyinto ukutholwa ukuhlaziya umchamo noma ngesikhathi sokukhulelwa, ngoba inetha ukuphepha kwawo kungase esibhedlela Kunconywa. Ngokuvamile emva zonke ezidingekayo kule isifo izinyathelo zokuxilonga isiguli ezinqunyiwe ukudla okuqinile kanye Umkhawulo kasawoti, amaprotheni, izinongo kanye nezivimbelakuvunda, ngamunye abelethwe imithi elwa namagciwane eziyinkimbinkimbi. amafomu Ezintsha ukuvuvukala kwezinso luqedwe nezinye amakhambi Phytotherapy abantu ngaphansi kokuqondisa nochwepheshe wezokwelapha. Emvelweni yesibili isifo ngesikhathi uphethwe zembula ezihleli izifo futhi baqala ukwelashwa okufanele. Phakathi esitebeleni ukuthethelelwa nesineke kuboniswe ukwelashwa kulesi sibhedlela.
Ngezinye izikhathi odokotela batusa ukuhlinzwa (amafomu ubovu pyelonephritis, khona eyodwa noma ngaphezulu ithumba, njll). Uma sitholakele isifo senziwa ngesikhathi esihle, impatho kuhlinzwa kuyinto esiphuthumayo ubomvu, ukwelashwa isinqandakuvunda futhi isiteji amanzi yesikhashana. Ezimweni ezimbi kakhulu kungase kube ukususwa izinso.
Ngisho noma ungazi kanjani futhi kuphi izinso ubuhlungu izinso, izimpawu zibonisa khona udokotela ku lesi sifo, futhi ukuhlolwa ukuqinisekisa noma cha uqinisekise izinsolo. Tshela udokotela wakho ngokushesha, njengoba izinso kabi, ucabange ukuthi kakade ezimweni eziphambili kungaba nzima ukushintsha into - bese, njengoba sishilo ngenhla, izinso Ungasusa. Ngakho-ke kubalulekile ukwazi izimpawu zesifo kanye bakwazi ukuchaza kudokotela kanjani ukulimaza nezinso.
Izifo zomzimba ziyinkimbinkimbi ngendlela kokubili abadala kanye nezingane. Uma ingane Yena ekhononda ukuthi unento kubuhlungu, iziphethe sluggishly noma ukukhononda, okubiza udokotela ekhaya noma ukusheshe emtholampilo. Akubalulekile izinkundla kwi-inthanethi ukuze uthole ukuthi yini okumele uyenze uma izinso ubuhlungu ingane. Ukuhlehlisa is inhlekelele ezaziwayo. Yebo, futhi unqume ukuthi ufuna ukuthatha noma yimuphi umuthi noma kunjalo engenakwenzeka. Udokotela wezingane noma eziphuthumayo udokotela Pomo isobho uhlole Ingane nangemva ukwelashwa inhlolovo ezibekiwe. Umsebenti wakho - ukuze ngokuqinile ulandele izincomo uchwepheshe.
Scalpels Steel: izinhlobo, izici, injongo
Izinzwa Cranial, 12 namabhuzu: anatomy, itafula imisebenzi
Indlela hlehlisa nyangazonke ngaphambi iholide noma esinye isenzo wemfanelo?
Indlela ukususa sutures ekhaya emva kokuhlinzwa?
Amazinga Water ukusetshenziswa, noma Ode to amanzi anikeza ukuphila
Umsebenzi Beautiful futhi iyingozi, noma kuyo okudingekile "Isaziso Mariners"
Ukulwisana ukubhema: sinomthwalo wemfanelo impilo yethu
Bangaki bukhoma "Hepatitis C" iziguli?
Umsoco banana: kulapho ewusizo lesi sithelo?
Rocket namaSoviet "Amandla" ikilasi superheavy
Ubani bekhunjulwa ngoSuku izisulu repressions zezombusazwe
Kuhle Iqembu "VKontakte": uhlu
I plywood ethe njo plywood? Yini i-glue for plywood ukukhetha?